Midho Hadhuudh ah, Kaniisadda Dunida Adduunka ee Switzerland (WKG)
Waa xagaaga. Indhahaygu way ka warwareegayaan dhul ballaaran oo ballaadhan. Dhir udgoonku wuxuu u bislaadaa iftiinka qorraxda diiranna goor dhow ayaa diyaar u ah goosashada. Beerreygu samir buu sugaa ilaa uu ka goosto dalaggiisa.
Markuu Ciise xertiisii ​​dhex marayay xertiisii, waxay ka jareen dhegaha hadhuudhka, gacmahoodana ku kariyeen oo ku qancaan gaajadoodii ugu weyneyd ee hadhuudhkii. Waxa ay yihiin dhowr hadhuudh ah ayaa sameeya waa wax la yaab leh! Goor dambe Ciise wuxuu ku yidhi rasuulladii: "Waxa beerta laga gooynayaa way badan yihiin, laakiin halkaas shaqaaluhu way ku yar yihiin" (Matayos 9,37 Tarjumaadda New Geneva).
Adiga, aqristaha qaaliga ah, fiiri dulsaarka galleyda aniga ilaah oo ogow in goosashada weyn ay sugeyso, taasoo laxiriirta shaqo badan. Waxaan rabaa inaan kugu dhiiri geliyo inaad rumeysato inaad tahay shaqaale qaali ah goosashada Ilaah isla mar ahaantaana aad qayb ka tahay goosashada. Waxaad fursad u leedahay inaad u duceyso shaqaalaha iyo guusha sidoo kale inaad naftaada u adeegto. Haddii aad jeceshahay Fokus Jesus, u dhiib majaladdaan qof xiiseynaya ama dalbo rukumasho. Markaa waxay kaqeyb qaadan kartaa farxadaha adiga naftaada dhiirigelinaya. Shaqadaada ku samee jacayl aan shuruud lahayn oo raac tallaabooyinka Ciise. Ciise, oo ah kibista nool ee samada ka jirta, wuxuu dhergi doonaa gaajaysnaanta qof kasta oo bilaa cunto ah.
Beeraleyda hadhuudhku waa sayidka midhaha, oo isagu wakhtigiisa wuu go'aamiyaa. Hadhuudh hadhuudh ah - oo aan isbarbardhigi karno - ayaa dhulka ku dhaca oo dhinta. Laakiin ma dhamaanin. Hadhuudh keliya ayaa ka soo baxa dhegta cusub taas oo keenta miro badan. Ku alla kii naftiisa jecel, waa lumiyaa; oo kan naftiisa neceb ee dunidan jooga ayaa xajin doona nolosha weligeed ah » (Yooxanaa 12,25).
Marka loo eego aragtidan, waxaad runtii doorbideysaa inaad fiiriso Ciise, kan kaa hor maray dhimashada. Sarakiciddiisa, wuxuu ku siinayaa nolosha cusub ee nimcadiisa.
Waxaan dhawaan u dabaaldegnay Bentakostiga, iiddii ubaxidda koowaad. Iiddani waxay marag ka tahay daadinta Ruuxa Quduuska ah oo rumaystayaasha. Maanta, sida ragga iyo dumarka wakhtiga, waxaan ku dhawaaqi karnaa in qof kasta oo rumaysta Ciise sara kacay, oo ah Wiilka Ilaah, inuu yahay Bixiyaha, qayb ka yahay goosashada ugu horreysa.